Turkiga oo xoojinaya sii socoshada wada-hadalkii Soomaaliya iyo Somaliland ee ay marti-geliyeen – Radio Daljir
Nofeembar 23, 2013 1:58 b 0
Hargaysa, November 23, 2013 – Dowladda Turkiga ayaa dardar gelinaysa mar kale wada-hadalii u socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland, sida uu Hargaysa ka sheegay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga.
Cemalettin Kanu Turan iyo xubno ganacsato Turkish ah oo la socda ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Hargaysa, waxaa si diiran u soo dhoweeyey madax ka tirsan Soomaaliland oo ay Hargaysa shirar ku wada qaateen, safiirka ayaa sheegay wax badan.
?Ujeedka socodkeenna wax badan ayuu isugu jiraa, waxa qayb ka ah in aan dar-dar gelino wada-hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dowladeenna Turkiga ay marti-gelisay, waxaa jira mowduucyo badan oo siyaasi ah oo la isku hayo, balse rajo fiican ayaa jirta.? Ayuu yiri safiirka Turkiga ee Soomaaliya Kanu Turan.
Docda kale, safiirku waxaa uu sheegay in dowladda Turkiga ay mashaariic maal-gashi ku samayn doonto deegaano ka tirsan Soomaaliland, mudane Kanu ayaa booqan doona dhowr deegaan oo ka tirsan dhulka Soomaaliland muddo afar cisho ah oo uu halkaas joogi doono.
Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa dhowr jeer shirar ku yeeshay dalka Turkiga si loo dhameeyo wax badan oo ay isku hayaan labbada dhinac, kadib shirkii ugu horeeyey ee lagu qabtay London sanadkii hore, labbada dhinac weli ma aysan gaarin heshiis dhamaystirsan oo Turkiga ayaa wada-hadalladii dhex dhexaadiye ka ah.
Cali Mire ?xannuun dadku sanka dhiig ka keennayaan baa 50 qof ku soo ritay Tooxin? (Dhegeyso)